नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण किन कम देखियो ? यी हुन् ५ कारण - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण किन कम देखियो ? यी हुन् ५ कारण
काठमाडौंः विकसित मानिएका कतिपय देशहरूमा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण धेरै फैलिएको देखिएका बेला नेपालमा भने यसको प्रकोप खासै देखिएको छैन।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपालमा ९ जना व्यक्तिमा मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् भने ८ जनालाई विभिन्न स्थानमा आइसोलेशनमा अर्थात एकान्तमा राखेर उपचार गरिदैँछ।
बुधवार साँझसम्मको विवरण अनुसार सङ्क्रमणको आशंकामा थप १ सय ३४ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको छ। उनीहरूको परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको छ।
कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालमा परीक्षण नै कम भएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको बताएका छन्।उनीहरूका भनाइमा जति थोरै परीक्षण भएको छ त्यसैका आधारमा नेपालमा कोरोनाभाइरस धेरै फैलिएको छैन भन्न सकिदैँन।
स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधवारसम्म कुल २ हजार ३ सय ६६ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये २ हजार ३ सय ५७ नमुनामा सङ्क्रमण देखिएको छैन।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी नेपालमा परीक्षणको गति र सङ्ख्या बढाउनु पर्ने बताउँछन्।उनी भन्छन्, “यो कुरा त हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। विशेषगरी ज्यानुअरीदेखि नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आए त्यसबेला नै नेपालमा धेरैमा सङ्क्रमण भएको पनि हुनसक्छ।”
त्यस्तो सङ्क्रमण समयक्रममा आफैँ ठीक भएर गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘नेपाल जर्नल अफ इपिडिमियोलोजी’मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर सरकारले केही दिनअघिदेखि काठमाण्डू बाहिर पनि परीक्षण सेवा विस्तार गरेको छ भने तीव्र रूपमा परीक्षण गर्ने जनाएको छ। कतिपय चिकित्सकहरूले बीबीसीसँग साझा गरेको अनुभवअनुसार उपत्यका बाहिर सेवा विस्तार गरिए पनि लक्षण देखिएकाहरूको थुकको नमुना लिन धेरै चिकित्सकहरू तत्पर देखिएका छैनन्।
त्यसको उदाहरण दिँदै आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एकजना चिकित्सकले भने, “सुदूरपश्चिममा भेटिएका सङ्क्रमितहरूको स्वाब लिनका लागि त्यहाँका चिकित्सकले नमानेपछि नेपाली सेनाका चिकित्सक पठाएर लिइएको थियो। अझै पनि चिकित्सकहरू नमुना लिन तत्पर छैनन्। त्यसैले नमुना सङ्कलन र परीक्षण बढाउने भनेर मात्र हुँदैन।”
त्यस्तै दाबी गर्नेमध्येका एकजना चिकित्सक हुन्-शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन। उनले विभिन्न पत्रपत्रिकामा आलेख नै प्रकाशित गरेर नेपाली जीवनशैलीको प्रभावले कोरोनाभाइरस फैलने सञ्जालहरू भत्किएको हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले भने, “हामीले धेरै पानी खेलाउने रहेछौँ अनि खानेकुराहरू पनि धेरै पकाएर खान्छौँ। त्यस्तै हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने वा म्वाइँ खाने चलन पनि हाम्रोमा कमै छ। यस्ता क्रियाकलापले कोरोनाभाइरस फैलनबाट रोकेको हुनसक्छ।”
३. नेपालीको प्रतिरक्षा प्रणाली ‘बलियो’हुनु
याे पनि पढ्नुस युरोपमा लकडाउन खुकुलो बनाउन पहल सुरू
याे पनि पढ्नुस भारतमा नेपाली कोरोना संक्रमित अस्पतालबाट फरार
नेपालमा प्राय: यातायातका साधनहरूमा भिडभाड भए पनि घामको प्रकाशमै हिड्ने खालका रहेको र सार्वजनिक यातायातमा विदेशीहरू चढ्दै नचढ्ने गरेकाले सङ्क्रमण कम गर्दा सङ्क्रमण कम भएको हुनसक्ने उनको तर्क छ।
तर नेपालमा काठमाण्डू भित्र केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र यस्ता पूर्वाधार नै नभएकाले पनि सङ्क्रमणको फैलावटको साङ्लो चुडाएको हुनसक्ने उनले बताए।